Izimvula zokugcina aziyixazululi inkinga yesomiso | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imvula eye yawa eSpain emasontweni adlule isizile ukubuyisa amazinga ezinqolobane kuyo yonke iPeninsula. Noma kunjalo, abasondeli ngisho inamandla anele okudambisa izinkinga zesomiso.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi amazinga amadamu akhule kanjani nokuqhathaniswa nalokho obekufanele sibe nakho?
1 Isomiso esiphelele
2 Ukusilela kwamanzi okugciniwe
3 Ukusetshenziswa kwamadamu nezimvula
Isomiso eSpain ayibonwanga kusukela ngo-1995 lapho amadamu kulo lonke elaseSpain afinyelela isilinganiso sama-34%. Lo 2017 uzovalwa ngokubhuka ngo-38,15%, ngemuva kwamasonto amathathu elandelanayo wezikhukhula. Lezi zikhukhula zisize amadamu ukuba alulame ngandlela-thile, kepha awudambisi isomiso esibi eSpain.
Umthamo wamanzi wonke ogcinwe eSpain namuhla ungama-21.391 31.691 cubic hectometres. leli nani likude kakhulu nesilinganiso seminyaka eyishumi edlule esime kumahektha angama-cubic angama-XNUMX.
Amazinga amadamu ayengekho kangako kusukela ngo-1995, lapho befika kumthamo we-34,71%. Isimo ngalesi sikhathi sishaqisa ikakhulukazi emachibini asenyakatho ntshonalanga, njengeDuero, eku-31,38% (okuyizinga elingakaze libonwe iminyaka engaphezu kwengu-30) noma iSegura, ese-14,11 , XNUMX%, okuyiyona ekhathaza kakhulu.
Ngenxa yemvula yala masonto inyukile, ikakhulukazi kwamanye ama-akhawunti asenyakatho nenhlonhlo asesimeni esingesihle neze. Amanye afana ne-Eastern Cantabrian, eku-90,41%, i-Western Cantabrian, eku-61,20% neMiño-Sil, kuma-44,22%.
Ukusilela kwamanzi okugciniwe
Imininingwane evela eMnyangweni Wezolimo kanye Nezokudoba, Ukudla kanye Nezemvelo ezaziwa namuhla, zokugcina ngo-2017, ziveza ukuthi izitsha ezinokushoda kwamanzi ziqhubeka nokuba yilezo zeSegura, okuyi ngo-14,11%; leyo kaJúcar, ingu-25%; umcengezi wase-Andalusi waseMedithera, ku-30,58%; IDuero, kuma-31,38%; naseGuadalquivir, ngama-31,69%.
Umgodi weSegura yiwona okhathaza kakhulu futhi amazinga abengekho kangako iminyaka engaphezu kweyishumi, lapho befika ku-14,26%. Amazinga aseJúcar nawo abe mancane kakhulu, yize nawo ayenjalo kwisomiso sango-2007, afinyelela kuma-20,02%.
Ngamazinga angaphansi kwama-50%, amabheshi eMiño-Sil (44,22%), iGalicia Costa (46,64), iDuero (31,38), iTajo (37,40), iGuadiana nayo izovala unyaka. (44,04), iGuadalete (38,82), iGuadalquivir (31,69), amabheshi ase-Andalusian Mediterranean (30,58), i-Ebro (48,91) namabheshi angaphakathi eCatalonia (45,79).
Njengoba sazi, inyakatho yeSpain ayithinteki kangako yisomiso, ngoba amazinga aso aphezulu: i-Eastern Cantabrian, ezoqeda unyaka ngamazinga angama-90,41; I-Western Cantabrian (61,20); amadamu eZwe laseBasque (80,95), nalawo kaTinto Odiel noPiedras (at 69).
Uma senza ukubuka konke kuwo wonke amadamu aseSpain, sithola iphesenti lama-38,15% uma kuqhathaniswa nonyaka odlule, okuvale unyaka ngo-51,1%. Njengoba sibona, unyaka nonyaka isomiso siba namandla kakhulu futhi sibe yingozi kakhulu, njengoba nokugwaduleka kukwanda.
Ukusetshenziswa kwamadamu nezimvula
Kunezinhlobo ezimbili zokusetshenziswa ezinikezwa amadamu: lezo zokusetshenziswa kokudla (lezo zokuphakela abantu) kanye nalezo zokuphehla amandla kagesi ophehlwa ngamanzi (ngezimpophoma).
Amachibi okusebenzisa okusetshenziswayo Bakude ngo-33,3% kunesibalo sanyakenye esingu-58,1%.
Ngakolunye uhlangothi, amadamu asetshenziselwa ukukhiqiza ugesi ophehlwa ngamanzi angama-49%, lapho isilinganiso seminyaka emihlanu edlule besingama-62,2%.
Izimvula zakamuva zithinte cishe lonke elaseSpain lisiza ukukhuphula amazinga amadamu, kepha ngokwezibikezelo ngeke zanele ukuqeda izinkinga zesomiso, ezizokwanda ehlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » Izimvula zokugcina aziyixazululi inkinga yesomiso
Ibhalansi yomonakalo odalwe yisiphepho uBruno